I-Templer Park Rainforest Retreat - I-Villa - I-Airbnb
I-Templer Park Rainforest Retreat - I-Villa
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguHan
IVilla inamagumbi okulala ayi-4 ane-en-suite ene-air-conditioning, enofikelelo kwidama lokuqubha, ii-hammocks, ikhitshi langaphandle kunye ne-BBQ, enedesika ejonge iBukit Takun kunye nebala legalufa. Zijikeleze ngendalo kuphela imizuzu engama-30 yokuqhuba ukusuka kumbindi we-KL.
Ukuhlehla kujikelezwe ngeembono ze-360 ° zeKanching Rainforest Reserve. Ekufikeni kwakho uya kuziva ngathi uye kwindawo ekude kodwa umgama wemizuzu engama-30 kuphela ukusuka kumbindi we-KL. Baleka kubuphithiphithi bobomi besixeko kwaye ubambe usapho lwakho kunye neendibano zezihlobo apha. Ubume bendalo buvumela undwendwe ngalunye ukuba luphole, luphumle, luxinezeleke kwaye luhlaziye.
Ibhedi enkulu eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1
4.77 · Izimvo eziyi-372
Indawo yokubuyela umva ibekwe kwiihektare ezi-3 zomhlaba ophakamileyo onokufikelela ngasese, kwindawo egayiweyo negadiweyo. Kukho iindawo zokupaka iimoto ezaneleyo. Okusingqongileyo kukubonelela ngokuzola; kupholile kwaye kuheleza umoya kuba ungqongwe lihlathi elinemvula.
'Abamelwane bakho' baquka iinkawu ezinezidlele, ii-otters, ukujonga amacikilishe, oonomatse, iintaka ezimibalabala zetropikhi, iintaka zasendle, amabhabhathane amakhulu, ohlabamanzi, amalulwane, oonomatse. Zilungiselele utyelelo lwabo ngamaxesha athile ngexesha lokuhlala kwakho kwindawo yokuphumla.
Umbuki zindwendwe ngu- Han
Umnumzana Saw uyakukhathalela ukurhoxa ngothando lwakhe kunye nolangazelelo lwendalo esingqongileyo kunye nenkxaso yethu, nosapho lwakhe. Sikuthanda ngokwenene ukudibana nabantu abatsha kunye nokwenza ubuhlobo neendwendwe ezikufutshane nakude.
Ukuzola kunye nokuzola ekubalekeni ihlathi lekhonkrithi, zonke iindwendwe zethu eziye zadibana nazo apha yinto esinethemba lokubelana ngayo nomntu wonke. Sikwanomdla wokwenene wendalo kunye nobomi. Kuninzi ekufuneka sikuphonononge eMalaysia kwaye siya konwaba ukwabelana nawe ngamava ethu kwaye sikukhokele kwiindawo ezintle ilizwe lethu elimangalisayo elinalo.
Umnumzana Saw uyakukhathalela ukurhoxa ngothando lwakhe kunye nolangazelelo lwendalo esingqongileyo kunye nenkxaso yethu, nosapho lwakhe. Sikuthanda ngokwenene ukudibana nabantu ab…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rawang